पदले होइन कामले रच्छ इतिहास, करोडौ नेपालीको मन मुटुमा जय कुलमान ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठमुख्य खबरपदले होइन कामले रच्छ इतिहास, करोडौ नेपालीको मन मुटुमा जय कुलमान !
पदले होइन कामले रच्छ इतिहास, करोडौ नेपालीको मन मुटुमा जय कुलमान !
Sudur Samaj | Monday September 14, 2020	Comments
काठमाडाैं, २९ भदाै । मुलुकका अर्थमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक एक साताका बीचमा फरकफरक शैलीमा बिदा भए। उच्च पद समालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई मुलुकको विकास र सुशासनका लागि फड्को मार्ने मौका थियो। उनीहरु बाघको शैलीमा छिरेर बिरालोका रुपमा बाहिरिए।
तर उनीहरुभन्दा निकै तल्लो पदमा रहेर काम गरेका कुलमान घिसिङ भने इतिहास रचेर बिदा भएका छन्। जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे सानो ठाउँबाट पनि नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् घिसिङ। घिमिरे र खतिवडाको बहिर्गमनबाट आम जनता बेखुसी देखिँदैनन्। आइतबार जिम्मेवारीबाट बिदा भएका घिसिङका सवालमा भने सिंगो मुलुक उनको पक्षमा छ। घिसिङले चारवर्षे कार्यकालमा नतिजा देखिने गरी दुईवटा काम गरे,
चर्को लोडसेडिड भोगेको मुलुकलाई २४ सै घण्टा बिजुली दिएर आम जनताको मन जिते, टाट पल्टिएको संस्थालाई नाफामा लगेर आर्थिक रुपमा मजबुत बनाए। यी काम सजिलै गर्न सकिने लाग्न सक्छ तर वास्तविकता त्यो होइन। सबैभन्दा गाह्रा काम यिनै थिए। १४ घण्टा लामो लोडसेडिडमा रहेको मुलुकलाई दुई वर्ष बित्न नपाउँदै लोडसेडिडमुक्त बनाउनु सजिलो काम होइन।
यस्तै ३५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटामा गएको संस्थालाई ४ वर्षमा ५ अर्ब नाफाको अवस्थामा लैजानु चमत्कारभन्दा कम होइन। घिसिङले बागडोर समाल्दा दैनिक १४ घण्टाभन्दा धेरै समय अँध्यारोमा बसेका मुलुकवासीलाई प्राधिकरणले धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपकरण नचलाउन सार्वजनिक अनुरोध गथ्र्यो। अहिले घिसिङ बाहिरिँदै गर्दा प्राधिकरणले सबै ग्राहकलाई सकेसम्म धेरै विद्युत् खपत गर्न अनुरोध गरिरहेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
भर्खरै नेपालमा आइपुग्यो रेल, हेर्न हरुका घुइँचो (तस्वीर हेर्नुहोस)
Breaking: आज मध्याह्न १२ बजे सम्म नेपालमा २ रेल आउदै !
Breaking News: भोलि मध्याह्न १२ बजेभित्र रेल नेपाल आइपुग्ने
खुशीको खबर : चौ’तर्फी दबादपछि कुलमान घिसिङको पुन: नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगियो !
कुलमान घिसिङलाई पुन नि’यु’क्ति गर भन्दै बालाजु र जोरपाटीमा प्र’द’र्शन
कुलमानको बिदा भाको दिन आजै बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइराला नियुक्त